HK – JIS.DIGITAL
He isajournalist. He has been working asareporter for Yangon Media since 2009. In 2013, he was the Chief of staff of Mawkun Magazine. In 2018, he worked asaresearcher at BNI - Myanmar Peace Monitor. In 2019, he worked asasenior data analyst for DVB. Now, he is working asafreelance journalist, data analyst and researcher.
နိဒါန်း “မလုပ်ရဲတာ ဘာမှ မရှိဘူး” ဆိုသည့်အတိုင်း အာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းအောင် ကာချုပ်မင်းအောင် လှိုင်၏ စစ်ကောင် စီတပ်သည် စစ်ကိုင်းတိုင်း ကနီမြို့နယ်အတွင်း ဒေသခံပြည်သူ ၄၀ဦးကို အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်ကာ ၎င်း...
နိဒါန်း “ အလောင်းအမှတ် . . . သုံည တယောက် ပြာကျသွားပြန်ပြီ ” ကဗျာဆရာ ဖော်ဝေးရေးသည့် “ မီးလောင်ပြင် ” အမည်ရှိ ကဗျာတစ်ပုဒ်၏...
HK August 13, 2021
“အာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင် ကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင်မှ အာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင် ကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင်”သို့ ဝန်ကြီးချုပ် ရာထူးအပ်နှင်းခြင်းဟု ဆိုရပါမည်။ နိဒါန်း စစ်အာဏာသိမ်းကာလ ၆လပြည့်သည့် ဩဂုတ်လ ၁ရက်တွင် အာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ကိုယ်တိုင် အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီပိုင် မြဝတီရုပ်သံမှ...
နိဒါန်း “ စစ်အာဏာရှင်ကျဆုံးရေး...တို့အရေး...တို့အရေး...သပိတ် သပိတ်၊ မှောက် မှောက်... အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည် ” ဇူလိုင် ၂၃ရက် နံနက်ပိုင်း၊ ရန်ကုန်မြို့ အင်းစိန်ထောင်အတွင်းမှ မတရားဖမ်းဆီးခံထားရသူများ၏ ထောင်တွင်းဟစ် ကြွေးသံများ...
HK July 25, 2021
နိဒါန်း အာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်သည် နိုင်ငံတော်သမ္မတရာထူး မရသဖြင့် စစ်အာဏာ သိမ်းကာ “သေမထူး ၊ နေမထူး” အလောင်း အစားတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ် သည်ဟု သုံးသပ်ယူဆသူများ ရှိပါသည်။ ထိုသုံးသပ်ယူဆချက်များသည်...
HK July 21, 2021
နှင်းကို – ရေးသည်။ ဇူလိုင်လ ၁၅ရက်တွင် ကြွေလွင့်ခဲ့သည့် နိုင်ငံရေးကြယ်ပွင့်တစ်ပွင့်ဖြစ်သော ဗကပအဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သူ၊ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သူ အန်ကယ်ဦးလှရွှေ (အောင်သာ – ပီသုံးလုံး) အား လေးစားဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် အန်ကယ်ဦးလှရွှေ၏...
သမိုင်းမှတ်စုနှင့် ဗိုလ်ချုပ်မိန့်ခွန်း ကောက်နှုတ်ချက်များ
HK July 19, 2021
၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၁၉ရက်၊ အာဇာနည်နေ့အတွက် ဂုဏ်ပြုဦးညွတ်သောအားဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ မိန့်ခွန်းများထဲမှ အချို့ကို ကောက်နှုတ်ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ များပြားကျယ်ပြန့်လှသော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း မိန့်ခွန်းများကို Click နှိပ်ကာ ရယူဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ပါသည်။ တပ်ထွက်...
ငြိမ်းငြိမ်းပြည့် – ရေးသည်။ ၁၈ ဇူလိုင် ၂၀၂၁။ လာမယ့်စက်တင်ဘာ ကုလသမဂ္ဂ Credentials Committee ဟာ တော်လှန်ရေးအစိုးရ / အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ (NUG) နဲ့ အာဏာလုစစ်ကောင်စီ...